Shina OTR Rim singa Mpamboatra OEM OEM ″ mpiorina ″ mpiorina 25 ″ | Hywg
Inona avy ireo singa amin'ny sisiny?
Singa faribolana dia peratra fanidiana, peratra sisiny, seza vakana, lakile familiana sy flange ilany ho an'ny karazan-tsivalana samihafa toa ny 3-PC, 5-PC & 7-PC OTR rims, 2-PC, 3-PC & 4-PC forklift rims. ny singa manodidina manana habe lehibe, manomboka amin'ny habe 8 "ka hatramin'ny 63". Singa faribolana dia manakiana ny kalitaon'ny toetr'andro sy ny fahaizany. Ny peratra fanidiana dia mila manana elastika marina mba hahazoana antoka fa manidy ny sisiny izy mandritra izany fotoana izany mora ny mametraka sy midina. Ny seza vakana dia manakiana ny fahaizan'ny sisiny, mitondra enta-mavesatra lehibe amin'ny sisiny izy. Ny peratra amin'ny lafiny no singa mifandray amin'ny kodiarana, mila matanjaka sy marina izy io mba hiarovana ny kodiarana.
Firy ny singa amin'ny rim?
Misy karazana isan-karazany singa manodidina, amin'ny fampiharana samihafa dia manana fenitra famolavolana isika singa manodidinaary singa mavesatra amin'ny adidy mavesatra. Voafaritry ny famolavolana,singa manodidina azo sokajiana ho eto ambany.
Fitaovana amin'ny sisiny fananganana fitaovana
- T-series, andiany EM.
Ireo singa ao amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany
- EM / EV andiany
- Vava vidy, peratra sisiny, seza vakana ho an'ny peratra forklift 3-PC sy 4-PC.
Inona avy ireo singa rim ampiasaina?
NY rim compoennts azo ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny sisin'ny OTR toy ny:
(1) Fitaovana fanamboarana
(2) Kitapo forklift
Ohatra maodely atolotray
Anaran'ny singa Rim Size
Peratra fanidiana 25 "
KITRA MPITONDRA BOARD Ny habe rehetra
Side Flange 25 ", 1.5"
Peratra lafiny 25 ", 2.0"
Seza Bead 25 ", 2.0", mpamily kely
25 ", 2.0" Mpamily lehibe
25 "x 4.00" (Voamarika)
Ny tombotsoantsika amin'ny singa rim?
Tamin'ny voalohany dia toy ny mpanamboatra vy kely, nanomboka namokatra ny HYWG singa manodidina nanomboka tamin'ny faran'ny taona 1990, dia lasa mpitarika tsena amin'ny kamio ny HYWG singa manodidina ary OTR singa manodidina, ny tsena dia nahatratra 70% ary 90% tany Sina; ny OTRsinga manodidina dia naondrana tany amin'ireo mpamokatra rim manerantany toa an'i Titan sy GKN. Androany HYWG irerysinga manodidina mpanamboatra afaka mamokatra kamio, OTR ary forklift singa manodidina, isika no mpitondra manerantany ao singa manodidina tsena.
Teo aloha: Tabilao indostrialy ho an'ny mpamorona China mpamokatra Tele finday Boom
Container Lift rim dia mahatratra ny sisin'ny stacker ary foana ...
Faritra indostrialy ho an'ny Boom lift Tele handler China ...
Ireo singa OTR Rim dia samy hafa habe amin'ny 8 ″ ...